The ọhụrụ version of Bitcoin Core n'ụzọ zuru ezu na-akwado SegWit-adreesị - Blockchain News
Softfork SeqWit wee ebe ke netwọk Bitcoin na August afọ gara aga na, n'adịghị hardfork, apụtaghị na amanyere bụ iwu eji ndị niile sonyere. N'agbanyeghị uru nke SegWit na okwu nke scalability, na dị ka a pụta – Mbelata nke ọrụ, uka doo emeghị, na taa SegWit-azụmahịa na Bitcoin si blockchain ka elu dị n'elu 13%.
Isi nsogbu bụ mgbagwoju nke na-eke SegWit adreesị maka “uninitiated”, ebe a bụ isi ọnọdụ maka mejuputa atumatu technology: SegWit-azụmahịa nwere ike rụrụ naanị ma ọ bụrụ na ziri ozi na onye nnata nwere SegWit-adreesị.
Bipụtara Bitcoin Core mmepe ntọhapụ nke 0.16.0 koodu-eme ka ọ mfe ike SegWit-adreesị na isi ahịa, Bitcoin Core. Maka nke a, SegWit e kwukwara ka iwu akara na wallet interface. Engineer Chaincode ụlọ nyocha na so na Bitcoin Core otu Marco Falke kwuru na e kere eke nke SegWit-adreesị-ekwe omume na aga na nsụgharị nke wallet, ma nke a na usoro bụ “kama ihere” na “ukwuu n'ime ezo.” Ma SegWit adreesị ga-setịpụrụ ndabere.
Na mgbakwunye, a bụ nke mbụ version nke na-akwado “nwa afọ SegWit-adreesị” – bech32 – ẹkenam site na mmepe Peter Vuille na Gregory Maxwell. Tụnyere omenala bitcoins, bech32 bụ ihe “dị mfe ojiji” na-akpaghị aka na-akwado SegWit. Dị ka Marco Falke, nke a bụ “ndị kasị akpali akpali nke tọhapụ.”
Chau na-ekwu na bech32 format-enye ala ụgwọ, ma ọtụtụ wallets na-adịghị ma na-akwado ya. Developers ịtụ anya na akpaka e kere eke nke SegWit adreesị ga-enyere belata Ụlọrụ. Ọzọ innovations na-iji na-amụba mgbanwe nke wallet.
N'oge SegWit akwado a ọnụ ọgụgụ dịtụ ntakịrị nke ahịa sonyere, ma ha nọmba dị otú ahụ na-amụba. taa, n'etiti ha bụ ndị na-wallets BitGo, mma, Ledger, Electrum, Samourai obere akpa, GreenAddress, emeghe Bazaar, MSIG, Edge, Keepke, HitBTC, BTC.com, Kraken, ShapeShift, Bitstamp na Bitso, nakwa dị ka Bitrefill na CoinGate ugwo ọrụ. Ebumnuche tinye SegWit adreesị ke akpa nkeji iri na ise nke 2018 esesịn a kọrọ site otu n'ime ndị kasị ibu purses Blockchain.info, na na n'oge February, na Coinbase mgbanwe mara ọkwa na ọ bụ na nke ikpeazụ ogbo nke anwale technology, na ọ ga-abụ dị ka ọrụ.
Ọ bụ ezie na na aga na ntọhapụ 0.15.1 na-na-iji na ịgbasa SegWit support na purses, mmepe na-ekwu na igba egbe nke ọzọ SegWit2x software nwa oge gbanwere ihe ha na-eme. Otu n'ime ihe ndị mere na mwepụta nke niile na-akwado SegWit adreesị e yigharịrị, dị ka Chau, bụ na otu chọrọ ịhụ otú SegWit na-arụ ọrụ na netwọk, na-eme ka n'aka na e nweghị vulnerabilities.
Cryptotrading - Entry na Wepụ Points
Mgbe ọ ka mma ...
Previous Post:The Swiss regulator mepụtara ihe ndị a chọrọ maka ICO
Next Post:A New Cryptocurrency Dị nnọọ wee si, Nke ahụ bụ dị ka Bold ka Bitcoin